China Outdoor led acrylic signboard vagadziri uye vatengesi |Zhengcheng
Zita rechigadzirwa: Acrylic light box signboard
Ingenious kuchengetedza chimiro dhizaini
Kambani yedu ine fekitori yehunyanzvi ine nzvimbo inosvika 4,200 square metres uye mana mabhokisi emwenje achigadzira mitsetse yekugadzira.Zhengcheng parizvino inoshanda anopfuura zana mabhureki muAsia uye inogadzira anopfuura zviuru makumi matatu emamita emabhokisi emagetsi ekuchengetedza simba pagore.
Fekitori yedu ine michina yekugadzira yehunyanzvi, uye ine yakawanda yekugadzira mold.Mushure mekunge vatengi vaisa odha, isu tinogona kugadzirwa kwakawanda.
Pamusoro pezvo, vashandi vane ruzivo rwakapfuma uye nepamusoro pekugadzira.Kambani yedu yakagadzira hukama hwehushamwari hwehushamwari nemhando dzakawanda, uye inonakidzwa nemukurumbira wakanaka muindasitiri yekugadzira zviratidzo.
Panguva imwecheteyo, isu tine fekitori yedu, iyo inoderedza komisheni yepakati, uye zvakare inoderedza mutengo wako wekutenga.
Zvitoro zvakawanda zvakavhurwa pamakona, uye mabhokisi emwenje echinyakare haachinjike uye haana kukodzera kuiswa.Nekudaro, mabhokisi emwenje eZhengcheng anogona kupepetwa pamadiro, aine chitarisiko chakanaka uye zviratidzo zvinopenya zvinokwezva vatengi.
Zvakapfuura: Chiratidzo chechitoro chekunze cheChaoshifa
Zvinotevera: Ministop nyore chitoro chemwenje bhokisi signboard
Supermarket Signboard, Blister Chiedza Bhokisi Signboard, Vacuum Kugadzira Chiedza Bhokisi Signboard, Zviratidzo Zvakavhenekerwa, Pharmacy Signboard, Kunze Kwechiedza Bhokisi Signboard,